ပုဂ္ဂလိက လွှဲသည်ဆိုရာဝယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပုဂ္ဂလိက လွှဲသည်ဆိုရာဝယ်
Posted by ကြောင်လေး on Jun 26, 2012 in Creative Writing, Critic |6comments
သဂျီးတစ်ယောက် ၊ကောင်းဖို့ ရောက်မူ
အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီးက မျက်ဖြေလင်္ကာရေးစပ်ခဲ့တယ်………
တလောက သမ်မတဂျီးမိန့်ခွန်းထဲမှာ လုပ်ငန်းတော်တော်များကို ပုဂ္ဂလိက လုပ်ပိုခွင့်ပေးမယ်လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်၊ ဒီရက်မှာတော့ ဌာနတွေ တော်တော်များများမှာလွှဲမဲ့ပြောင်းမဲ့အကြောင်းတွေကို တော်တော်ပြောနေကြတယ်။တချို့ဌာနတွေ တိုင်းကြထွာကြ၊ ရေးကြဆွဲကြ၊ တွက်ကြချက်ကြ၊နဲ့အလုပ်တွေတော်တော်ရှုပ်နေတဲ့အထိပါပဲ။
မနေ့ည ရှစ်နာရီလောက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကဖုန်းဝင်လာတယ်။ မှားဝင်လာတာပါ။ သူခေါ်ချင်တာက တခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ ဌာနတူ သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ ဘာအကြောင်းတွေများပြောမလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့…… အခုဌာနတော်များများကို ပုဂ္ဂလိကလွှဲဖို့လုပ်နေကြောင်း၊တို့ဌာနကိုလည်းပုဂ္ဂလိက လွှဲတော့မယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ အဲလိုလွှဲရင် သတ်မှတ်လုပ်သက်မှီတဲ့ သူတွေက ပင်စင်ယူရင် ယူနိုင်ပြီးတော့၊ မမီတဲ့သူတွေကတော့ အခြားသင့်တော်ရာ ဌာနတွေကိုပြောင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း။ အဲလိုပြောင်းရရင် ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ဌာနရောက်ရင်မလွယ်ကြောင်း။ ပြောင်းရရွှေ့ရနဲ့ အစဉ်မပြေရင် အလုပ်ထွက်လိုက်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း။ ဟိုတုန်းက ကုန်သွယ်ရေးက၊အရက်ဆိုင်တို့၊ဆေးဆိုင်တို့ အဲလိုဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း။ နောက်ကုန်သွယ်လယ်ယာက ၀န်ထမ်းတွေ၊ဒိုင်မှူးတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း။ အာစီယံလစာလေးတောင် စားရတော့မှာမဟုတ်ကြောင်း။ သူ့မိန်းမက မိန်းမအမြင် မိန်းမအသိနဲ့ပြောတယ်…… အစိုးရက လူလည်(အဲ..အစိုးရလည်) ကျတယ်၊အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို အာစီယံလစာတိုးပေးရခါနီးမှ မပေးချင်လို့ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ပြုတ်အောင်၊ လျော့ကုန်အောင်လုပ်ပစ်တာဖြစ်မယ်လို့ပြောကြောင်း။ လုပ်အားပေး၊ နေ့စားလုပ်သက်နဲ့ ခုနစ်နှစ်လောက်လုပ်ခဲရပြီး ပါမိနစ် လုပ်သက်ဆယ်နှစ် ဆယ့်ငါးနှစ်ဝန်ထမ်းတွေ အဲလိုဖြစ်ရတာအရမ်းနစ်နာကြောင်းတွေပြောပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ပြန်ပြောပြပါတယ်။ ဒါကတော့မတတ်နိုင်ကြောင်း၊ အများကောင်းဖို့ လုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်း။ ကံမကောင်းသူများကတော့ ဒုက္ခရောက်တဲ့အထဲပါသွားမှာဖြစ်ကြောင်း။ လတ်တလောတင် ရေနံက မိတ်ဆွေများ၊ဂုံနီစက်ရုံကမိတ်ဆွေများလဲ အချို့ပြောင်းသွားကြကြောင်း၊ဒုက္ခတွေရောက်ကြောင်း။ အချို့ပင်စင်ယူလိုက်ကြကြောင်း။ အချို့ မရပ်တည်နိုင်လို့ အလုပ်ထွက်ပြီး နေရပ်ပြန်လာတာအများကြီးရှိကြောင်း။ ကိုယ်တွေလဲ ဘယ်နေရာမျိုးရောက်လို့ ဘယ်ဘ၀မျိုးကြုံရမည်မသိသေးကြောင်း ပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
အများကောင်းဖို့အတွက် အချို့ အချို့တွေမှာတော့ ပျက်ပေးရတာဓမ္မတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပျက်တဲ့သူတွေက ပျက်ပြီးတော့ တဖက်ကတကယ်ကောင်းလာဖို့လဲလိုပါသေးတယ်။ ပျက်သူတွေပျက်ပြီး တဖက်က တကယ်ကောင်းမလာဖူးဆိုရင်……………….
ပုဂ္ဂလိကလွှဲတယ်ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်၊တစ်သင်းတစ်ဖွဲ့ ထဲကိုလွှဲလိုက်ရုံနဲ့မကောင်းနိုင်ပါဘူး၊ အသင်းအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီး(အများကြီးဆိုတာ ဆယ်ဂဏန်းအောက်လောက်ပါ၊ နှစ်ခုထက်ကျော်ရင်အများဆိုတော့လဲ) ကိုလွှဲပြီး ဟိုလူက ဟိုနယ်မြေ၊ ဒီလူက ဒီနယ်မြေ ဆိုပြီးလုပ်စားနေလဲ သိပ်တော့ထူးမလာပါဘူး၊ တစ်သင်းတစ်ဖွဲ့ထဲချုပ်ကိုင်ပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြဦးမှာပါ။ နယ်မြေတိုင်း မြို့တိုင်းမှာ တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ သူတွေ တရားဝင် ရိုးရိုးသားသားမျှမျှတတ မှန်ကန်တဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိးရှိရမှာပါ။ ဒါမှ အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်တိုးတက်လာမှာပါ။လက်ရှိမှာ ပုဂ္ဂလိက လွှဲလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ ရေနံ(ဓါတ်ဆီ)ဆိုင်တွေနဲ့၊ မိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းချခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ရန်ကုန်၊မန္တလေးလို ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိနေတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာသိပ်မသိသာပေမဲ့၊ နယ်တွေမှာတော့မမှန်ကန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဆိုချင်တာကတော့ ပုဂ္ဂလိကလွှဲလိုက်လို့ ပိုကောင်းလာတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲရှိတဲ့နယ်မြို့တွေမှာ ဈေးမမှန်ခြင်း၊ခွက်မမှန်ခြင်း၊ပေပါမပြည့်ခြင်းဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။ အစိုးရဆိုင်ကမှာ ၀န်ထမ်းကိုဗျူးဗျူးဗြဲဗြဲနဲ့သွားခြောက်လို့ရသေးတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ငါတို့က ဘယ်သူနောက်ခံကွ၊ဘယ်ဝါနောက်ခံကွနဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတောင် ဆိုင်မန်နေဂျာကို ကားနဲ့ပင့်ဖိတ်ပြီး အရက်တူတူသောက်ရတဲ့အနေအထားပါ(၀ဋ်လိုက်တာ)။
တယ်လီဖုန်းကဒ်တွေ ငွေဖြည့်ကဒ်တွေဆိုလဲဒီတိုင်းပါပဲ။ ရောင်းချင်တဲ့ဈေးနဲ့ပြောရောင်းနေကြတာ။ ပစ္စည်းပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဈေးတစ်မျိုးတင်ရောင်းကြတာပါ။ငွေဖြည့်ကဒ်တွေ ပစ္စည်းပြတ်တယ်ဆိုပြီး ကော်မရှင်နှုန်းတွေလျှော့ချပစ်တယ်။ နယ်မှာလက်လီပြန်ရောင်းတဲ့လူတွေက ဈေးတင်ရောင်းတယ်။ဆင်းကဒ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲ၊ ဒီမနက်တင်ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ဒါတောင်ရန်ကုန်နော်။ နယ်တွေမှာ ဖုန်းဆင်းကပ်ကိုတော့ဈေးရင်းနဲ့ရောင်းပြီး သူတို့ဆိုင်က ဟန်းဆက်ဝယ်မှရမယ် မ၀ယ်ရင်မရဘူးဆိုပြီးဟန်းဆက်ဈေးကို တင်ရောင်းနေတာမျိုးလဲရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မသိနားမလယ်တဲ့သူတွေကလည်းဝယ်ကြရတာပါပဲ။ ဆင်းကဒ်ပဲဝယ်မယ်ဆိုရင် တစ်သောင်းလောက်တင်ရောင်းကြတယ်။ နောက်ပြီးတချို့ဆိုင်တွေက ဈေးရင်းနဲ့ရောင်း တယ်ဆိုပြီး တစ်ခြားနယ်က ဟာတွေယူလာရောင်းတယ်။ ကဒ်ပျက်/ပျောက် ကြတော့ဒုက္ခရောက်ရော။ ရောင်းတဲ့ဆိုင်က တာဝန်ယူမှုမရှိပါဘူး။ တချို့လဲ ဟိုရွာရတယ်၊ဒီရွာရတယ်နဲ့ အတင်းထိုးရောင်းလိုက်၊ရွာကလူတွေဝယ်သွားပြီးမရတော့မှ ပွဲစားနဲ့တစ်ဖက်လှည့်ပြန်ကောက်ခိုင်းပြီး ရောင်းတာမျိုးလည်းကြားရပါတယ်။ နဲတော့နဲပါတယ်။ ဒါတွေဟာမှန်ကန်တဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိူးမရှိလို့ဖြစ်တာပါ။ အဲဒီတော့ ပျက်တဲ့သူတွေပျက်၊နာတဲ့သူတွေနာပြီးတော့လွှဲလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေဟာ
လွှဲကားလွှဲ၏…….မထူး…ဟူး….ဟူး …. ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့သာ ဆန္ဒပြုရင်းဖြင့်။ ။
ဓမ္မတာတည့်…… ဟုတ်ပဟုတ်ပ ဖတ်လိုက်ရတာ ပါဝါတိုးတော့မယ်
ထူးမခြားနား ပတ်ပျိုး တီးရမြဲ
ကိုကြောင်လေးရေ ၊ ပုဂ္ဂလိကဘယ်လိုလွှဲမယ်ဆိုတာ-
ကြံ့ဖွတ်အတွင်းရေးမှုး ဦးဌေးဦး၏၊တရုတ်ကွန်မြူနစ် ၀န်ကြီးဝမ်ကြားရီနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာပြောခဲ့တယ်—-
စီးပွါးရေးလူမှုရေးအရထိမ်းချုပ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း၊စီးပွါးရေးအခြေခံကောင်းများရရန်တရုတ်နှင့်ပိုမိုပူးပေါင်း ဘို့လိုအပ်ကြောင်းတဲ့ဗျား။အတိုက်အခံတွေကိုနလန်မထူအောင်လုပ်ဘို့၊စီးပွါးရေးနလံမထူအောင်ချုပ်ကိုင် ဘို့ပေါ့၊သည်တော့ထုံးစံအတိုင်းပုဂ္ဂလိကဆိုတာ၊စစ်အစိုးရလက်ထက်အလိုတော်ရိများနှင့်ကြံ့ဖွတ်ပိုင်၊တရုတ်ပိုင်တွေပဲ များမှာမို့၊လူကိုလည်းလူမထင်၊ဘယ်လိုအော်အော်အော်ချင်ရာအော် ဘယ်ပြည်သူမှဂရုမစိုက်တဲ့ ကိုယ့်အကျိုးပဲကြည့် တဲ့ ခရုမ်နီတွေထံပဲလက်လွှဲ မှာပါဗျား။ တရုတ်ကလည်းအနောက်ဒီမိုကရေစီအုပ်စုလက်ထဲ မြန်မာ့စီးပွါးရေးရောက်သွါးမှာအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ထိတ် လန့်နေ တာကိုမဖုံနိုင်၊မဖိနိုင်ကိုတရားဝင်ပြောလာပါသဗျား။မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရမှာအကြောက်ဆုံးက
ကိုကြောင်လေးရေ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်တွေ လေးလအတွင်းအပြီးချပေးမယ်
ဆိုပြီး စလုပ်နေပါပီ။က-ည-န ကို ပုဂ္ဂလိက ပေးလိုက်ပီလားဗျာ။အရင်
ထူးကုမ္ပဏီက ယူတယ်ကြားလို့ ။